Otu esi etinye koodu Visual Studio Code (VS Code) na Fedora 34/35 - LinuxCapable
Na ntuziaka na-esonụ, ị ga-amụta ka esi etinye Visual Code Editor na Fedora.
OS akwadoro: Fedora Linux 34/35 (Ụdị ọhụrụ ga-arụkwa ọrụ)
Site na ndabara, Visual Studio anaghị esonye na ebe nchekwa Fedora ọkọlọtọ. Agbanyeghị, ị nwere ike mepụta ngwa ngwa ma bubata ebe nchekwa ọrụ Visual Studio na sistemụ gị site na ime ihe ndị a.
Ọzọ, tinye ihe ndị a ka ị nwee ike ibubata ebe nchekwa wee wụnye koodu VS:
Site na nhazi ebe nchekwa isi mmalite, ị ga-emerịrị ndepụta isi mmalite njikwa ngwugwu dnf gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ tupu nrụnye Visual Studio. Iji mee nke a, gbanye iwu a na njedebe gị:
Ekele, ị tinyela Visual Studio Code na Fedora.
Ka imelite koodu VS, mee ya Iwu melite DNF na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Ma ọ bụ kwalite naanị Visual Studio n'onwe ya:
Ntuziaka ahụ egosila gị otu esi etinye Microsoft Visual Code maka Fedora ma gbakwunye ebe nchekwa iji melite mmemme na-ejighi aka budata na wụnye. Visual Code bụ otu n'ime ndị ndezi IDE efu a na-ejikarị na mbara ala. Ọ dịkwa fechaa yana nhọrọ magburu onwe ya maka sistemụ gị ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na sava kama iji ndị editọ ederede Linux ndabara dị ka. wd or nano.
Categories Fedora Tags Fedora 34, Ihe ngosi Visual Studio Mail igodo